Lozam-pifamoivoizana any Kongo, farafaharatsiny olona 50 no namoy ny ainy - RayHaber
HomeIZAO TONTOLO IZAOAFRIKA243 CongoLozam-pifamoivoizana any Congo, farafaharatsiny olona 50 no namoy ny ainy
13 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 243 Congo, AFRIKA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Headline 0
farafaharatsiny lozam-pifamoivoizana ao Congo
Araka ny tatitra voalohany, olona 50 farafaharatsiny no maty tamin'ny loza nitranga tamin'ny maraina rehefa nidina ny lamasinina tany amin'ny faritra Tanganyika tany atsimo atsinanan'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo.
Reuters nanonona ny minisitry ny raharaha maha-olombelona Steve Mbikayi nilaza fa ny lozam-pifamoivoizana dia niseho tao amin'ny tanànan'i Mayibaridi tamin'ny telo maraina. Mbikayi dia nilaza fa farafaharatsiny olona 50 no maty tamin'ny loza, olona 23 no naratra ary nentina namonjy hopitaly.
Twitter Maneho ny alaheloko ho an'ireo fianakavian'ireo maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana aho ary maniry ny handovantsika ireo naratra, hoy i Bakan Ministra tao amin'ny Twitter.
Ny zotra lamasinina any Congo dia tsy voahaja tsara ary ny ankamaroan'ny lokomotro dia miorina amin'ny 1960. Noho izany antony izany, ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fitaterana lalamby dia miteraka fahafatesana lehibe.
Olona iray hafa no maty tamin'ny lozam-piaramanidina tao Kahramanmaraş 08 / 07 / 2014 Olona iray hafa no maty tamin'ny lozam-piaramanidina lozam-piaramanidina tao Kahramanmaraş: 3 dia naratra tamin'ilay loza izay nahafaty olona iray vokatry ny lamasinina fitaterana an-dalamby. Ny fiaran-dalamby mitondra entana avy any Adana mankany Malatya, distrikan'ny distrikan'i 4 Türkoğlu Yeniköy, izay nivezivezin'ny andro talohan'io, Salih Doğramacı'nın namely an'i Besey Aksin (70), nianjera tany amin'ny hopitalin'i Necip Fazil City. Mustafa Aksın no maty tamin'ny loza, Salih Doğramacı, Yusuf Baran Doğramacı, 8 taona ary Besey Aksın no naratra.
Olona maty noho ny loza nitranga tany TÜLOMSAŞ 26 / 02 / 2013 Olona iray no maty vokatry ny lozam-piasa nitranga tao TULOMSAŞ Eskişehir niasa tamin'ny asan'ny mpisambotra dia naratra mafy noho ny fiantraikan'ilay tapaka tapaka, namoy ny ainy. Araka ny vaovao azo, Hoşnudiye Quarter ao Torkia loha masiny sy Engine Industry araka ny Ahmet Wing Street (TÜLOMSAŞ) Saraçoğlu'nda ny mpiasa Hussein (53), voadonan'ny faritra tafasaraka nandritra ny sarety Tsy mpanala. Naratra mafy i Saraçoğlu, ekipan'ny sampan-draharaha misahana ny vonjy taitra 112 nesorina tao amin'ny hopitaly fitsaboana Eskişehir Osmangazi (ESOGU), na dia maty aza ny ainy. Loharano: www.haberciniz.biz
Olona iray namoy ny ainy teo amin'ny fiara fitaterana 23 / 08 / 2014 Olona iray no namoy ny ainy tao amin'ny Car Wire Cable Rize: ny distrikan'i Rize'nin Çayeli ao amin'ny vohitr'i Karaağaç izay mifandray amin'ny reniranon'ny rivotra maty vady tanora. Nandritra ny hetsika tany Middle Neighborhood, nidina niasa niaraka tamin'ny fianakaviany tao an-tanimbolin'ny Ismail Gur (16), ary ny entana an-teheba teo amin'ny lamosiny dia naniry ny handalo eo ambany fiarandalamby ao amin'ny zaridaina. Te hanainga ny fiara fitaterana antsoina hoe Sırma izy, amin'ny fitazonana azy amin'ny tanany. Ny tanora nampalahelo dia nitondra ny hai-panjakana tao amin'ny fanjakana ao Çayeli İshakoğlu, na dia teo aza ny fandaharana rehetra natao teto, dia namoy ny ainy noho ny fahatapahan'ny herinaratra i İsmail.
Nodimandry ilay olona maty teo ambanin'ny lamasinina 18 / 06 / 2012 Ny hetsika, HalkalıNy lamasinina fiarandalamby avy amin'ny làlana Sirkeci dia nitranga tao anatin'ny ora 17.45 taorian'ny nandehanana ny km 1 avy amin'ny fiantsonana Küçükçekmece. Najanon'ilay mpamily fiaran-dalamby, taorian'ny loza, ny fiaran-dalamby, nidina izy ary nandrava ny làlan'ny tovolahy izay nahatsikaritra ny fiainany. Nantsoiny hoe androm-pahoriana ny polisy 155 ary nampahafantatra ny ekipa polisy. Jereo ny nataon'ireo ekipa mpitandro filaminana teo amin'ny sehatra tamin'ny alalan'ny fakana fepetra fiarovana manodidina ny vatana dia nanao famerenana. Noho ny fanadihadiana, dia noheverina fa ny olona izay tsy nanana karatra maha-identity dia lehilahy 24 lahy. Taorian'ny asa nataon'ireo ekipa mpitandro filaminana niaraka tamin'ny fiaran'ny fandevenana an'i Metropolitan Istanbul, taorian'ny ora 3 Ad
Ankara Elvankent, fiaran-dalamby haingam-pandeha no maty iray 23 / 12 / 2012 Elvankent gara tao Ankara, Ahmet Tyro, rehefa niverina avy miantsena (54) ny vahoakany, araka ny mandalo ny lalana ny fiaran-dalamby, dia namoy ny ainy raha mbola mitoetra eto ambany ny fiaran-dalamby haingam-pandeha avy tamin'ny lalana mankany Eskişehir. Ny mponina any amin'ny faritra, ny hany toerana azo antoka ao amin'ny faritra ho an'ny famakiana ny ondana dia feno rano, noho izany ireo mpandeha an-tongotra dia mahatsapa fahasahiranana, hoy izy. IZY, na dia niantso ny mponina ao an-tsambo aza ny filazana fa tsy reraka ny rano, dia naneho ny fihetseham-pony tamin'ilay loza. Loharano: HaberTurk
Fitaovana taonjato faha-100 naseho tao amin'ny tranombak'i Erzurum Gar nanamaivana ny tantara
Ny tombontsoa amin'ny fitaterana an'i Erzurum Miorina amin'ny làlana landy manan-tantara
Olona iray hafa no maty tamin'ny lozam-piaramanidina tao Kahramanmaraş
Olona maty noho ny loza nitranga tany TÜLOMSAŞ
Olona iray namoy ny ainy teo amin'ny fiara fitaterana
Nodimandry ilay olona maty teo ambanin'ny lamasinina
Metrobus dia namely olona iray izay namoy ny ainy (Video)
Olona iray no maty teo ambany fiaran-dalamby tao Konya
Ny olona 13 dia maty tamin'ny lozam-pifamoivoizan'ny taona 579
Ny olona 1 dia namoy ny ainy tamin'ny fiampitana iray tao Aydın